Miisa 300 izy ireo no sahanin’ny ONG Manda mivantana ankehitriny, ampianarina sy tohanana mba hahafahany mivoatra amin’ny fiainana. Anisan’ny manohana azy ireo akaiky ny orinasam-pifandraisana Airtel izay marihina fa mitsinjo hatrany ny maha olona, indrindra fa ireo fianakaviana sy ankizy sahirana. Hikarakara fampisehoana maimaimpoana entina hanampiana ny ONG Manda izy ireo ny sabotsy 17 novambra ho avy izao. Etsy amin’ny CGM Analakely no hanatanterahana izany manomboka amin’ny 3 ora folakandro. Ny tarika DO B ahitana ireo tanora mpanakanto mivoy ny gadona Hip-hop no hanome aina ny lanonana, izay marihina fa tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny fahadimy taona nijoroan’ny tarika. Ankoatra ity tarika ity dia hanana vahiny miisa valo tsy hampoizina izy ireo dia ireo mpanao rap malaza eto amintsika, ny mpandihy, ny mpitendry valiha … Afaka mandrotsaka izay foiny entina hanohanana ireo ankizy sahirana ny malalatanana sy ireo mpankafy tsy an-kanavaka amin’io sabotsy io.